Wasiiro ka tirsan Xukuumadda oo Gaaray Magaalada Beledweyn ee Xarunta Gobalaka Hiiraan – STAR FM SOMALIA
Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyn ee Gobolka Hiiraan, halkaasoo ay ka jirto xaalad bani’aadanimo oo ka dhalatay fatahaada uu sameeyay wabiga Shabelle iyo colaad ka taagneyd magaalada.
Sida ay sheegayaan wararka Wasiiradan ayaa waxaa hogaaminayay Wasiirka Arrimaha Gudaha C/raxmaan Maxamed Xuseen iyo Wasiirka Amniga C/risaaq Cumar Maxamed iyo mas’uuliyiin kale.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Wasiirka Amniga oo wariyeyaasha kula hadlay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ayaa sheegay in socdaalkooda uu la xiriiro sidii ay indha indheyn ugu sameyn lahaayeen xaalada bani’aadanimo ee ka jirta magaalada.
Sidoo kale Wasiirada ayaa sheegay in magaalada Beledweyn ay ku soo wajahan tahay deeq dowladda Federaalka ugu tala gashay dadka ku barakacay fatahaadaha.
Magaalada Beledweyn ayaa waxaa horay ugu sugnaa Guddi Gurmad ah oo ay magacawday dowladda Federaalka, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Wasiirka Batroolka iyo Wasiirka Dhalinyarada.
Wararka ayaa sheegaya in wasiirada maanta gaaray Beledweyn ay kormeer ku tagayaan deegaanka Ceel Jaalle, halkaasoo kumanaan qoysas ka soo barakacay fatahaada dib u dejin loogu sameeyay.
Hey’adda samo fal ah iyo deeq ka timid dowladda Jabuuti ayaa dhowaan la gaarsiiyay qoysaska ka barakacay magaalada Beledweyn, kuwaasoo ay la soo deristay xaalado nololeed.
Odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka in siyaasadeysay gargaarka bani’aadanimada ee lala soo gaari lahaa shacabka Beledweyn, markii abaaro iyo colaad isugu darsameen.